IDelta Airlines ithonya ama-spikes angama-gab ngaphezulu kwegunya elisha lokugoma le-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » IDelta Airlines ithonya ama-spikes angama-gab ngaphezulu kwegunya elisha lokugoma le-COVID-19
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amasiko • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ngo-Agasti, kwaqubuka ingxoxo ebabazekayo phakathi kwabathonya abazungeze iDelta Air Lines ngenkathi inkampani imemezela ukuthi izokhokhisa imali engaphezulu kuka-US $ 200 ngenyanga kubasebenzi abangagonyelwe i-COVID-19.
Izinkampani zase-US ziza nezinhlelo zokugoma ze-COVID-29.
IDelta Air Lines izophoqelela ukukhokhisa okungaphezulu kwama- $ 200 njalo ngenyanga kubasebenzi abangagonyiwe.
Uhlelo lweDelta Air Lines luholele ekukhuleni okungu-150% kwezingxoxo ezinomthelela.
Izinkampani eziningana zeza nezinhlelo zegunya lokugoma ngemuva kokugunyazwa yi-US Food and Drug Administration (FDA) kumuthi wokugoma iPfizer-BioNTech COVID-19 ngo-Agasti 2021. IDelta Air Lines, Inc (Delta Air Lines) nayo yathatha izinyathelo ezinqala ukugqugquzela abasebenzi ngokuthi ukukhuphula izinga lokunakekelwa kwezempilo kwabasebenzi abangagonyiwe ohlelweni lwabo lokunakekelwa kwezempilo nokuhlangabezana nokwenyuka okulindelekile kwesidingo sokuhamba. Lokhu kuholele ekukhuleni okumangazayo okungu-150% kwezingxoxo ezinethonya ezungeze 'imishanguzo' kudeshibhodi yethonya lenkampani eDelta Air Lines phakathi nezinsuku ezingama-90 ezedlule (ngoJuni-Agasti), ezinyangeni ezintathu ezedlule.
Abathonya babone lokhu kuyicebo lakamuva lokuphoqa abasebenzi ukuthi babe ne-jab ye-COVID-19, njengoba amacala okutheleleka okuthelelana ngezifo evale umbono wezindiza. Imizwa yabathonya nayo ibiyinhle ngalesi sinyathelo njengoba kuyisinyathelo esidingekayo ukubhekana nezingcuphe zezimali ezihambisanayo ngoba ukuhlala esibhedlela okujwayelekile kwe-COVID-19 kubiza indiza yezindiza engu-US $ 50,000 umuntu ngamunye.
Ngo-Agasti, okunye ukuphakama kwezingxoxo ezinethonya kwaqashelwa ngenkathi inkampani yezindiza imemezela ukusebenzisana kwayo nomqhubi wesitimela esinejubane elikhulu eFrance naseBelgium uThalys ukuhlinzeka ukuxhumana kwesitimela phakathi kwe-Amsterdam namadolobha aseBelgium iBrussels ne-Antwerp.
Ngokunjalo, kube nokukhula okucijile ezingxoxweni ezinomthelela ngoJulayi, lapho inkampani yezindiza ezinze e-Atlanta ibike inzuzo yayo yokuqala yekota kusukela kwaqala ubhadane lwe-COVID-19, ngemuva kokuphula ikota yokulahleka. Ukukhuphuka kwesidingo sokuhamba kwezokungcebeleka kwasekhaya nokuhamba ngebhizinisi kanye nosizo lukahulumeni wesifundazwe kusekele iDelta Air Lines ukuthola inzuzo yekota ye-US $ 652m ku-Q2 2021.
IDelta Air Lines yamemezela uhlelo lwayo olumangazayo ngoJuni lokuqasha abashayeli bezindiza abangaphezulu kuka-1,000 2022 ngehlobo lika-XNUMX, ngokulindela ukwanda kwesidingo sokuhamba ngemuva kokululama kulo bhubhane. Lokhu kuholele ekukhuleni kwezingxoxo ezinethonya ngoJuni.
I-Job Analytics Database yembula ukuthi iningi le-2020, inkampani yabona ukuthunyelwa kwemisebenzi enezinombolo ezilodwa. Kodwa-ke, abakwaDelta Air Lines babone ukwanda komsebenzi wokuqasha ngo-2021. Ukufakwa kuhlu kukhuphukile kusuka emisebenzini engu-101 ngoJanuwari 2021 kuya emisebenzini engu-474 ngo-Agasti 2021, lapho kuthunyelwa khona imisebenzi kwenyusa ama-55% phakathi kwe-Q2 2021 ne-Q3 2021.
IDelta Air Lines ikhuphula ukuqashwa ngo-2021 ukuhlangabezana nesidingo esikhulu sokuhamba. Ngokwengeziwe, ukuqashwa kwenkampani kufaka phakathi inani elibalulekile lezindima zokulondolozwa okulungiselelwe ngezikhathi ezithile zonyaka ezifana nabenzeli bamakhasimende, abasebenza ngamathikithi / amasango, abasebenzeli bezimpahla abakhonjisiwe. Ukuqasha ochwepheshe bezindiza nonjiniyela babone ukuphakama kusukela ngoJuni 2021. Le nkampani ibuye igxile ekukhuliseni imali engenayo yezimpahla kanye nesabelo semakethe esifundeni saseLatin nase-EMEA.